HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay shaqaalaysiin doontaa shaqaalaha 420
12 / 12 / 2019 34 Istanbul, Shaqooyinka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara
Dawladda Hoose ee Magaalada 12 2019 Diseembar 44 waxay shaaca ka qaaday inay shaqaaleysiinayso shaqaalaha 420 ee ka kala socda laamo kala duwan gabi ahaantoodna aan lahayn KPSS. Sida ku xusan ogeysiiska ay daabacday Madaxtooyada IMM iyadoo loo marayo websaydhka rasmiga ah ee Madaxtooyada Madaxtooyada, IMM waxay shaqaalaysiin doontaa shaqaalaha hoos ku xusan oo leh dhibcaha salka u ah KPSS 60, 80 iyo 90 iyada oo aan sharuudaha KPSS. Codsiyada shaqa qorista ee shaqaalaha IMM waxaa la sameyn doonaa inta u dhaxaysa 13-17 Diseembar 2019.
Baaqa rasmiga ah waxaa la daabacay sida soo socota;
In lagu shaqaaleeyo sida ku xusan qodobka 5393 ee Sharciga Dawladda Hoose 49 oo lagu tirinay hay'adda Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul; Shaqaalaha qandaraasku waa in lagu shaqaaleeyaa iyada oo loo adeegsanayo meeleyn furan jagooyinka banaan ee hoos ku xusan, waa haddii ay xukumaan booska, tirada, aqoonta iyo shuruudaha kale.
WAA KADORA WAA MILMAHA UU KU SAABSAN QOFKA?
10 Lawyer Law; qalin jabiyay
Shaqaalaha Bulshada ee 4; Qalin jabinta mid ka mid ah Shaqada Bulshada, Shaqada Bulshada ama barnaamijyada cilmiga bulshada ee cilmiga bulshada
2 Psychologist; Qalin-jabinta barnaamijka jaamacadda ee cilmu-nafsiga
Daaweynta jimicsiga jirka ee 2 iyo baxnaaninta, jimicsiga jirka iyo dhaqancelinta
Kalkaalisada 28; Ka qalin-jabinta Kalkaalinta Caafimaadka ama Kalkaalisooyinka iyo Adeegyada Caafimaadka, Sarkaalka Caafimaadka barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadda
Umulisada 3; Qalin-jabinta barnaamijka shahaadada umulisooyinka
2 Horumarinta Caruurta; Qalin jabinta barnaamijyada hormarinta ubadka ama caafimaadka caruurta iyo hormarinta caruurta
Injineerka 50; Ka qalin jabiyay barnaamijka shahaadada jaamacadeed ee YDS - Ingiriis Dhibcaha ugu yar ee 60
Injineerka 2; Qalin-jabinta Barnaamijka Injineeriyada Deegaanka ee YDS - Ingiriis Dhibcaha ugu yar ee 60
Injineerka 9; Ka qalin jabiyay mid ka mid ah barnaamijyada shahaadada koowaad ee shahaadada injineernimada Korontada iyo Korontada, Injineerka Koronto-Elektiroonigga ah ama injineernimada Korantada YDS - Ingriiska Ugu Yar ee 60
Injineerka 3; Qalin jabinta mid ka mid ah barnaamijyada shahaadada koowaad ee Injineerinka farsamada / Injineerka ama injineeriyada iyo Warshadaha Injineerka YDS - Af Ingiriisiga Ugu Yar 60
Injineerka 20; Qalin jebinta injineerinka Geodesy iyo Sawirka sawir-gacmeedka, Geodesy iyo Cartography, Injineerinka sahaminta ama barnaamijka 'Gomatic Engineering undergraduate' YDS - Ingiriis Dhibcaha ugu yar ee 60
Injineerka 6; Ka qalin jabiyay Injineerinka Warshadaha, Injineerada Nidaamka Warshadaha ama Warshadaha Warshadaha iyo Nidaamka Injineerinka YDS - Ingiriis Dhibcaha ugu yar ee 60
Injineerka 6; Shahaado jaamacadeed ee Injineerka Ganacsiga YDS - Ingiriis Dhibcaha ugu yar ee 60
Qorsheeyaha Magaalada 20; Ka qalin jabiyay barnaamijka shahaadada koowaad ee Barnaamijka Magaalada iyo Gobolka YDS - Ingiriis Dhibcaha ugu yar ee 60
20 Architect; Bachelor of Architecture shahaadada YDS - Ingiriis Dhibcaha ugu yar ee 60
Farshaxanka Muuqaalka 4; Ka qalin jabiyay mid ka mid ah barnaamijyada shahaadada koowaad ee cilmiga dhismaha ee Landscape Architecture, Dhismeedka Dhulka iyo Naqshadda Magaalooyinka, Naqshadda Magaalada iyo Dhismaha Muuqda, Dhismaha Magaalooyinka iyo Naqshadda Magaalooyinka YDS - Ingriiska dhibco ugu yar ee 60
4 Xisaabta; Xisaab, Xisaab - Kumbiyuutar, Xisaab iyo Computer, Xisaab iyo Informatics, Xisaabta-Informatics, Barnaamijyada kumbuyuutareedka xisaabta, Cilmiga xisaabta iyo kumbuyuutarka, Xisaabaadka iyo Sayniska kumbuyuutarka si ay uga qalin jabiyaan mid ka mid ah barnaamijyada shahaadada koowaad ee YDS - Ingriiska ugu yar 60 score score.
Xisaabiyaha 4; Shahaadada Bachelor's Statistics, waxay ka qalin jabisay YDS, - Ingriisiga ayaa ugu yaraan keenta 60
Dhaqaalaha 18; Ka qalin jabiyay mid ka mid ah barnaamijyada bachelorka ee dhaqaalaha, dhaqaalaha, maamulka ganacsiga iyo dhaqaalaha YDS - Ingiriis Dhibcaha ugu yar ee 60
2 turjubaan; YDS - Ingiriis Dhibcaha ugu yar ee 90
2 Archaeologist; Archaeology, Archaeology iyo Art Taariikhda, Classical Archaeology, Prehistory, Protohistory iyo pre-Asian Archaeology, Protohistory iyo pre-Asian Archaeology, prehistoric Archaeology, prehistoric Archaeology
Taariikhyahan Fanka 3; Ka qalin jabiyay barnaamijka shahaadiga ah ee Taariikhda Farshaxanka
Barnaamijka 4; Barnaamijyada kumbuyuutar, Barnaamijyada kumbuyuutarka (Internet), Barnaamijyada kumbuyuutar, Teknolojiyada kumbuyuutar iyo barnaamijyada, Teknolojiyada websaydhada iyo barnaamijyada
Farsamaynta 15; Dhismaha, Farsamooyinka Dhismaha, Tiknolojiyadda Dhismaha si ay uga qalin jabiso mid ka mid ah barnaamijyada shahaadada la xiriira
Farsamaynta 12; Mashiinnada, Mashiinnada Shaqada, Qalabka Mashiinka iyo Teknolojiyada Qalabka ah, Mashiinnada Qalabka Kumbuyuutareedka lagu Caawinayo, Mashiinka Wershada Awoodda Qalabka Thermal si ay uga qalin jabiyaan mid ka mid ah barnaamijyada shahaadada iskaashiga
Farsamaynta 10; Qalin-jabinta mid ka mid ah barnaamijyada shahaadada iskaashiga ee Khariiddada, Khariiddada Cadastre, Khariidadda iyo Sahaminta Miinada, Farsamaynta Khariidadda, Khariidadda iyo Cadastre
Farsamaynta 13; Khariidadaha Hay'adaha Waxbarashada Dugsiga Sare - Diiwaanka Dhulka - Deegaanka Cadastre iyo Laamaha Ama Deegaanka Tikniyoolajiyada Dhismaha - Khariidadda iyo Laanta Cadastre
Farsamaynta 12; Ka qalin-jabiyey cilmiga teknolojiyada farsamada gacanta iyo laamaha machadyada waxbarashada dugsiga sare
Macalinka 35 Teknolojiyada Macluumaadka,
Tababaraha Tababaraha 12 Jarmalka, 1 Shiine, 1 Farsi, 3 Faransiis, 25 Ingiriis, 1 Isbaanish, 1 Talyaani, 1 Jabaan, 1 Korean, 2 Ruushka YDS - Dhibcaha ugu Yar Ruushka 80
Macalinka 2-ka kuriga iyo barnaamijka ka qalin-jabinta suugaanta
Macallinka Xarafka 10, Xisaabaadka 11 iyo Maaliyadda, 24 Music
GUUD IYO SHURUUDAHA GUUD EE CODSASHADA:
Shuruudaha guud iyo kuwa gaarka ah ee la raaci doono codsiyada boosaska banaan ee Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul waa sida soo socota.
SHURUUDAHA GUUD EE CODSASHADA:
Codsadayaasha loo magacaabayo jagooyinka lagu dhawaaqay waa inay lahaadaan shuruudaha guud ee soo socda ee lagu sheegay farqadda (A) ee farqadda koowaad ee Qodobka 657 ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee 48.
a. Inaad noqoto muwaadin Turki ah
b. Lagama qaadi karo xuquuqda shacabka,
c. Xitaa haddii muddooyinka ku xusan Qodobka 53 ee Sharciga Ciqaabta Turkiga ay dhaafeen; Dembiyada ka dhanka ah nabadgelyada gobolka xitaa haddii lagu xukumay hal sano ama kabadan dambiga lagu galay si ula kac ah ama cafis, dambiyada ka soo horjeedda amarka dastuurka iyo shaqadiisa, laaluushka, musuqmaasuqa, laaluushka, xatooyada, khayaanada, musuqmaasuqa, anshax xumada. in aan lagu xukumin kicitaan, maslaxad jilicsan, maslaxadda waxqabadka falka, lacag sharci darrada ah ama tahriibinta,
d. Loogu talagalay ragga tartamayaasha ah xagga adeegga militariga; aan lug ku lahayn adeegga milatariga ama aan gaarin da'da milatariga, ama, haddii ay gaartay da'da militariga, u adeegeysay adeeg millatari oo firfircoon ama loo wareejiyay ama loo wareejiyay fasalka keydka,
d. Aan lahayn jirro maskaxeed ama itaal darri jireed oo ka horjoogsanaysa isaga / iyada inay si joogto ah u gudato waajibaadkeeda, e. In la fuliyo shuruudaha kale ee codsiyada loogu talagalay jagooyinka lagu dhawaaqay
SHURUUDAHA GAARKA AH EE CODSASHADA:
a. In aan laga saarin hay'adihii dowliga ahaa iyo ururradii uu horay uga shaqeeyey sababo aan la aqbalin ama sababo anshaxeed awgood,
b. Nuqulkii asalka ahaa ee shahaadooyinka codsadayaasha, ardayda qalin jabisay (haddii ay jiraan) iyo koobi ka mid ah iyaga oggolaansho Machadkayaga (1)
c. Iyagu ma aysan gaarin da'da 30 taariikhda imtixaanka (20 / 12 / 1989 iyo markii dambe dhalatay), ç. Codsadayaasha codsanaya boos qareen waxaa looga baahan doonaa inay lahaadaan “Ruqsadda Qareenka”. Nuqulkii asalka ahaa ee laysanka qareenka iyo koobi si loo ansixiyo Hay'adeena (1)
d. Meesha macalinka, i ,lem Meelaynta ku saleysan Field "iyo" Meelaha Waxbarida, Meelaynta iyo mabaadi'da barista hazırlanan oo ay diyaarisay Wasaaradda Waxbarashada Qaranka ayaa la fulin doonaa.
e. Loogu talagalay booska Tababaraha (inuu ka qalinjabiyo barnaamijka Kuhadalka Luqadda iyo Suugaanta), waxaa lagama maarmaan ah in si guul leh loo dhammaystiro Barnaamijka Waxbaridda Waxbaridda Dugsiga Sare iyada oo aan la helin tababbarka ama Barnaamijka Shahaadada Qaab-dhismeedka Waxbarshada ee Shahaadada kaas oo la furay iyada oo lala kaashanayo Wasaaradda Waxbarashada Qaranka iyo Golaha Tacliinta Sare.
f. Wixii jagooyinka looga dhawaaqay, haddii waxbarashadii la raadsaday lagu dhammeeyo dibedda; Hay'adaha waxbarashada sare, habraaca waxaa lagu fulin doonaa iyada oo la raacayo shahaadooyinka u dhigma ee ay soo saartay Wasaaradda Waxbarashada Qaranka iyo Golaha Tacliinta Sare ee tacliinta sare.
g. Shuruudaha Luuqada Shisheeye ee jagooyinka la raadinayo, Xeerka 6114 7. ee 6. Waxaa barbar socda Tilmaanta Imtixaannada Luqadda Shisheeyaha ee ay diyaarisay Agaasinka Qiimeynta, Xulashada iyo Xarunta Meelaynta, sharciga waxaa la qaddarin doonaa inta lagu gudajiyo ansaxnimada imtixaannada.
SAXIIXYADA LOO BAAHAN YAHAY EE DIIWAAN GALIYAYAASHA MARKII DIIWAAN GALIN:
Musharixiinta doonaya in ay qaataan imtixaanka waa 13 / 12 / 2019 - 17 / 12 / 2019 dhexeeya buuxinta foomka codsiga saxiixay elektaroonig ah via cinwaanka ay ku dari doonaa dukumentiyada soo socda https://www.turkiye.gov.tr/ ah.
Kaarka Aqoonsiga asalka ah iyo sawir-qaade si loo ansixiyo Hay'adeena (tirada 1)
Nuqulkii asalka ahaa ee shahaadada qalin-jabinta (hadaanu ahayn warqad qalin-jabinta) iyo koobi si loo ansixiyo Hay'adeena (lambarka 1)
Daabacaadda internetka ee Dukumiintiga natiijada YDS (loogu talagalay jagooyinka luqadaha qalaad) (cutubyada 1)
Hadeysan jirin YDS, koobi asalka dukumiintiyada natiijada imtixaanka iyo koobi si loo ansaxiyo Hay'adayada (1)
Sawirka noolaha (mid lagu dhejin karo foomka dalabka) (gogo '2)
Goobta, TAARIIKHDA, FOOMKA iyo MARKA CODSASHADA:
Musharaxiinta 13 / 12 / 2019 - 17 / 12 / 2019, inta u dhaxaysa https://www.turkiye.gov.tr/ cinwaanka dhex foomka codsiga iyo waraaqaha kor ku xusan waxay saxiixin elektaroonig Istanbul degmada Metropolitan Resources Human Branch Sastion Mahallesi Şehzadebaşı Street No: 5 34134 Hoolka Dawladda Hoose (kamupersoneli.net) Cinwaanka Saraçhane Fatih Istanbul wuxuu ku dabaqi doonaa inuu shaqsi ahaan u dhammaystiro nidaamka dalabka. Codsiyada lagu sameeyo boosta iyo emayl lama tixgelin doono.
SAMEEYAASHADA CODSADAHA - TILMAAMAHA LACAG-LA'AAN:
Ka mid ah musharixiinta u qalma inay ka qeybgalaan imtixaanka, 5 (shan) jeer tirada shaqooyinka bannaan (shaqsiyaadka guud ee 2100) ee loo magacaabayo laga bilaabo musharaxa oo leh darajada ugu sareysa qalinjabinta ka dib darajaynta in la sameeyo iyada oo loo eegayo heerka qalin-jabinta ee booska loogu yeeri doono imtixaanka. Murashaxiinta kale ee leh isla qalinjabinta musharraxii ugu dambeeyay ee loogu yeerayo imtixaanka ayaa sidoo kale lagu casuumi doonaa imtixaanka. Liiska musharaxiinta u qalma in ay qaataan imtixaanka, 19 / 12 / 2019 taariikhda ay tahay in la dhawaaqay in musharixiinta imtixaanka gelitaanka cinwaanka https://www.turkiye.gov.tr/ yeelan doonaan in ay helaan waraaqaha via cinwaanka this. Murashaxiinta waxaa looga baahan yahay inay joogaan goobta imtixaanka taariikhda iyo waqtiga ku qoran dukumintiga gelitaanka imtixaanka ee ay ka heleen nidaamka. 6.
Goobta, Waqtiyada iyo Mawduucyada Tijaabada:
Imtixaanka afka ah ee shaqaaluhu qandaraas ku leeyihiin ayaa lagu qaban doonaa Laanta Magaalada Istanbul ee Xarunta Xuquuqda Aadanaha ee ku taal cinwaanka 20 / 12 / 2019 - 26 / 12 / 2019 ee Kemalpasa Mahallesi 15 July Martyrs Street No: 5 34134 Hall Hall Sarachane Fatih Istanbul. Maadaama marxaladaha kale ee shaqa qorista ay kuxirantahay imtixaanka iyo natiijooyinkeeda, cudurdaarna looma aqbalidoono hadii uusan qaadan imtixaanka.
Murashaxiinta aan ka qeybgalin imtixaanka inkasta oo ay xaq u leeyihiin in ay galaan imtixaanka waxaa loo qaadanayaa in ay xaq u lahaayeen imtixaanka. Imtixaanka waxaa lagu qaadayaa hadal ahaan si loo cabbiro aqoonta iyo xirfadaha murashaxiinta.
Baadhitaan afka ah;
a) Dastuurka dalka Turkiga,
b) Mabadii 'Atatürk' iyo Taariikhdii Kacaankii Turkiga,
c) Sharci aasaasi ah oo ku saabsan maamullada maxalliga ah (Law No. 5393, Law No. 5216, Law No. 5302, Law No. 5355, Law No. 442]
ç) Shuruucda Mabaadi'da Anshaxa Asluubta ee Saraakiisha Dadweynaha iyo Nidaamyada iyo Mabaadi'da Codsiga;
d) Cabbiraadda aqoon xirfadeed iyo aqoon wax ku ool ah iyo xirfadaha la xiriira booska.
SAAMAYNTA TAHRIIBKA - KU SAABSAN SAAMAYNTA:
Baadhitaan afka ah; Dhibcaha 15'er ee mawduucyada aan kor ku soo xusnay, iyo dhibcaha 40 wadarta, oo ay ku jiraan dhibco 100 ah oo lagu cabiro xirfadlaha iyo aqoonta la taaban karo iyo xirfadaha la xiriira booska.
Si loogu guuleysto imtixaanka, dhibcaha ugu yar ee 100 waa in laga helaa buundada buuxda ee 60. Dhibcaha guusha musharixiinta ee ku saleysan meeleynta waxaa loo go'aamiyaa sida dhibcaha imtixaanka loo xisaabiyo iyadoo loo eegayo sharraxaadda sare; Haddii ay jirto baahi loo qabo imtixaanka luuqadda qalaad, waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo la qaato celceliska xisaabta ee dhibcaha imtixaanka iyo dhibcaha YDS.
Haddii buundooyinka guusha ee murashaxiinta ay isku mid yihiin, fasalka ugu sareeya qalinjabinta jagada ayaa mudnaanta la siinayaa.
Dhibcaha 60 ama wixii ka sareeya ee imtixaanka ma noqonayaan mid xaq u leh codsadayaasha aan u qalmin darajadan. Natiijooyinka imtixaanka ayaa la qoray seddex maalmood ka dib markii lagu dhawaaqay liiska guusha ee bogga guud ee hay'addeenna (http://www.ibb.gov.tr). Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Maya: 5 34134 Hall Hall Saraçhane Fatih Istanbul Waaxda Kheyraadka Aadanaha (2. Sagxada, Qolka 216) waa laga dacwoon karaa. Diidmada waxaa dhammaystiri doona guddiga imtixaanka (www.kamupersoneli.net) saddex maalmood gudahooda qofkii ay khusaysona waxaa lagu ogeysiin doonaa qoraal. Guddiga Imtixaanaadka; wuxuu xaq u leeyahay inuu qaato ama midkoodna boosaska lagu dhawaaqay ku dhawaaqista shaqaalaysiinta dhamaadka imtixaanka haddii buundooyinka guusha lagu helo inay hooseeyaan ama aysan ku filnayn.
MEESHU WAA INUU HALISTA UGU JIRA
Meesha shaqaaluhu leeyihiin ee loo magacaabi doono hay'addeenna waxaa lagu go'aamin doonaa iyadoo loo eegayo baahida adeeg ee dhammaan degmooyinka Istanbul (dhammaan degmooyinka).
Si dokumentiyada looga codsado codsadayaasha ku baasay imtixaanka, fadlan booqo bogga websaydhka (http://www.ibb.gov.trsidoo kale waa la daabici doonaa. Dhammaan dacwadaha kuwa lagu helo inay sameeyeen been abuur ama warbixin aan sax ahayn inta lagu gudajiray ama kadib wajiga codsiga ayaa la joojinayaa oo dacwad dambiileed ayaa loo gudbin doonaa Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud si loogu dabaqo qodobada Xeerka Ciqaabta Turkiga.
Degmada Boosaaso iyo TCDD si ay u wada shaqeeyaan Izmir Bay markii labaad
Degmada Ankara ee caasimadda ayaa ka dhigi doonta 'funicular' dooxooyinka duufaanta leh
Dawlada Hoose ee Kobanheegan si ay u dhisaan buundada baabuurta tareemada
Diyaargarowga Mashruuca Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Istanbul
Ogaysiiska Qandaraaska: Gaadiidka Gawaarida Lagu Gadan Karo (Magaalada Istanbul ee Magaalooyinka)
Qandaraaska ugu dambeeya ee qandaraaska lagu iibsanayo 126 gawaarida waaweyn ee Magaaladda Istanbul ee Magaalada…
Shaqaalaysiinta Shaqaalaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul